साउदीको जेलमा मृ, त्युदण्ड कुरिरहेकी आमा … भन्छिन् म नि’र्दोष छु बाबु मलाई यहाँबाट ब’चाएर लैजा – Nep Stok
साउदीको जेलमा मृ, त्युदण्ड कुरिरहेकी आमा … भन्छिन् म नि’र्दोष छु बाबु मलाई यहाँबाट ब’चाएर लैजा
पुष २७, २०७८ मंगलबार 276
तपाईंको आमासँग मिल्ने नाम भएकी एक महिला साउदीको जेलमा हुनुहुन्छ । तपाईंको आमा हो कि अरू नै, एक पटक आएर भेट्नुपर्‍यो ∕’ नवलपरासीका सुनील गुरुङलाई साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव भरत खनालले २०७५ फागुनको एक दिन फोनमा भने ।
सुनील साउदी अरबको प्रमुख औद्योगिक सहर दमाममा काम गरिरहेका थिए । उनी डेढ वर्षअघि मात्रै त्यहाँ पुगेका थिए । ‘मे’री आमा’को श’ व म आफैंले अन्तिम संस्का’र गरिसकेको छु । काज’किरिया पनि भइसकेको छ,’ आश्चर्य मान्दै उनले खनालसमक्ष भने, ‘नाम मिल्दैमा मेरो आमा हुन सक्ला र ? तैपनि म भेट्न आउँछु ।’
सुनीलले २०६९ वैशाखमा पशुपति आर्यघाटमा आमा सरस्वतीलाई दागबत्ती दिएका थिए । घरेलु कामदारका रूपमा साउदी अरब पुगेको ७ महिनामै सरस्वती’को श व आएको थियो । सुनील र सुनीलकी दिदी सुशीलालाई आमा साउदी पुगेको थाहा थिएन । बुबा’को मृ’त्यु भएपछि सम्पर्कविहीन भएकी उनी साउदी पुगेको मृ’त्यु’को खबरपछि मात्र थाहा पाएको सुनील बताउँछन् । साउदीबाट आए’को श’व नचिन्ने भइसकेको थियो ।
आँखा निकै गडेका थिए । गाला चाउरिएको थियो । श’वसँगै रहेको कागजातमा सरस्वतीको फोटोसहितको राहदानी थियो । तिनै प्रमाणलाई आधार बनाएर आर्यघाट’मा दा’ह’संस्कार गरियो । सुनील आफैंले दागबत्ती दिए ।
खनालको फोनबाट बिथोलिएको मन लिएर सुनील झन्डै चार सय किलोमिटर टाढा रहेको रियादस्थित नेपाली दूतावासमा तोकिएको समयमा पुगे । २०७५ चैतमा खनालले सुनीललाई रियादमै रहेको मालाज जे’ल’मा लिएर गए । जेलभित्र पुग्नासाथ सुनील कहालिए, ‘आमा… म सुनील ∕’ सरस्वती एकछिन त अकमकिइन् । सुनीललाई चिन्नेबित्तिकै रुन थालिहालिन्, ‘तँ कहाँबाट यहाँसम्म आइपुगिस् बाबु ? मलाई यहाँबाट उद्धा’र गरेर लैजा ।’‘तपाईंको नाम गरेर एउटा ला’स आएको थियो । त्यसलाई जलायौं । अहिले तपाईं त यहाँ पो हुनुहुन्छ,’ सुनीलले आमासँग भनेका थिए, ‘आमाकै नाम र फोटोसहितको पासपोर्ट, मृ’त्यु दर्ताको प्रमाणपत्र र बन्द बाकसमा आएको श’व थियो ।
सरस्वतीले आफ्नो ला’स भनेर अरूकै ज’लाएको सुन्दा अचम्म मान्दै सोधिन्, ‘तिमीहरूले कसको ला’स ज’लायौ त ?’
‘शव’सँग आएको पासपोर्ट तपाईंको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले जि’उँदै देख्दा मलाई सपना हो कि विपनाजस्तो लागिरहेको छ आमा ।’ दूतावासले पनि श’व साटिएकामा केही बताएको छैन । कम्पनीले नै कागज साटिदिएकाले एउटाको श’वमा अर्काको पासपोर्टका आधारमा कागजात बनेको हुन सक्ने दूतावासको अनुमान छ । जेलमा आमाछोराबीच कुराकानी भइसकेपछि केहीबेर सन्नाटा छायो । दुवैका आँखा रसिला भइसकेका थिए । उनीहरूलाई भेट्न १५ मिनेटको मात्रै समय दिइएको थियो । सुनील छुट्टिएर निस्किए ।
‘आमालाई देख्नेबित्तिकै त्यसबेला मेरो त दिमाग नै शून्य भयो । एकछिन सपना हो कि विपना जस्तो लाग्यो ?’ उनले भने, ‘जसलाई मैले आमा भनेर दाग’बत्ती दिएँ, त्यो अनुहार झलझली याद आयो । मैले त केही सोच्नै सकेको छैन ।’
जे’लमा भएको कुराकानीमा सरस्वतीले आफूले ह’ त्या’को अभियोग’मा मृ’ त्यु द’ण्ड’को सजाय पाए’को सुनीललाई सुनाएकी थिइन् । ‘म’लाई मृ’ त्युद’ण्ड’को सजाय दिने फैसला भइसकेको छ । कहिले कतिखेर मेरो जीवन जान्छ, थाहा छैन,’ उनले
भनेकी थिइन्, ‘म निर्दोष छु । मैले मेरो मालिक’को ह’ त्या गरे’को होइन । मलाई फ’साइए’को हो ।’ त्यही कुरा उनले दूतावासलाई पनि भनिसकेकी थिइन् । मालिकलाई च’ क्कु प्र हा र ग री ह’ त्या गरे’को अ’भियोगमा साउदी प्रहरीले २०७० भदौ २३ गते घरबाटै ५४ वर्षीया सरस्वती घिमिरे (गुरुङ) लाई प क्राउ गरे को थियो ।
दूतावासका अनुसार सरस्वतीले बयानमा आफू’ले ह’ त्या गरे’को स्वी कार गरेको भन्दै अदालतले २०७१ मंसिर २४ मा मृ त्यु’दण्ड’को स जाय दिने फैस ला सुनाएको थियो । तल्लो अदा’लत’ले मृ’ त्यु द’ण्डको स’जाय सुनाएको तीन वर्षपछि मात्रै दू तावासलाई जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि दूतावासले सरस्वतीको परिवारको खोजी थालेको थियो । यही क्रममा दूतावासबाट सुनीललाई फोन गएको थियो । ‘म सप्लाई कम्पनीमा काम गर्थें । कम्पनी राम्रो थिएन । आमालाई फेरि दोस्रोपटक भेट्न जान पाइनँ,’ सुनील भन्छन्, ‘त्यसपछि आमाले बेलाबखत फोन गर्नुहुन्छ ।’ सरस्वतीले दुई पटक सरकारी वकिलको कार्यालय’मा ह’ त्या गरे’को स्वी’कार गरेकी छन्, तर परिवारसमक्ष आफू’लाई द’बाब दिइएकाले क’बोल गरेको भनेकी छन् ।
‘मलाई मालिक्नीले फ’काइ–फु’ल्याई ह त्या को अभि योग स्वी कार गर्न भनेकी थिइन्,’ उनले परिवार र दूतावासका कर्मचारीसँग भन्ने गरेकी छन्, ‘यहाँको का नुन मैले बुझिनँ । मालिक्नी’ले म’ला’ई फ’साई ।’ उनका अनुसार माथिल्लो तलामा काम गरिरहेका बेला कसैले त’ल्लो तला’मा मालिक’को ह’ त्या गरे’को हो ।
‘ह, त्या गर्नेले मला’ई च’ क्कु हात’मा दिई बा’थरुममा ल गेर थु’निदिएको हो,’ उनले परिवारसमक्ष दा’बी गरेकी छन् । उनको जीवनरक्षाको अ’पिल गर्दै दूतावासले पु’नरावेदन गरेको छ । बिहीबार पनि पुनरावेदन अदालतमा सरस्वतीको मु’ द्दा’मा सु’नुवाइ भयो । अदालत’ले के फै स ला गर्‍यो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । उनको मु’द्दालाई सुरुवातदेखि हेरिरहेका तत्कालीन राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतका अनुसार परिवारले माफी दिए मृ’ त्यु’द’ ण्ड’बाट जो’गाउन सकिन्छ ।
‘हामीले त्य’तिखेर मृ’ त्यु’ द’ण्ड’बाट जो’गाउन का’नुनी ल’डा’इँ पनि ल’डिरहेका थियौं । त्योसँगै परिवारलाई भेटेर माफी दिने प्रक्रिया पनि थालेका थियौं,’ उनले भने, ‘सा’उदी परिवारबाट त्यति स’कारात्मक जवाफ आएन ।’ आमा’लाई भेटेर स्वदेश फर्केपछि पनि सुनील र सुशीला भने उद्धारका लागि तीन वर्षदेखि सम्बन्धित निकायमा धाइरहेका छन् । ‘हामीले आमा गुमाइसकेका थियौं । अहिले आएर आमा जिउँ’दै हुनुहुन्छ । तर मृ’ त्यु द’ण्ड पाउनुभएको छ,’ छोरी सुशीला मगरले भनिन्, ‘सानैमा बुबा गुमायौं । फेरि आमा गुमा’यौं भनेर बसेका थियौं । उहाँ त जीवितै हुनुहुँदो रहेछ । तर जे’ल’मा हुनुहुन्छ, निर्दोष आमालाई कसरी जो’गाउने होला ?’-उज्योलोनेपालबाट।
Prevआज ३०० औं पृथ्वी जयन्ती, विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइँदै
Nextविज्ञानको अर्को चमत्कारः सुँगुरको मुटु मानिसमा सफल प्रत्यारोपण
ऋण मुक्त हुने अचुक तान्त्रिक उपाय :
गायिकाकी वकिल भन्छिन् : पल शाह जेल जाने निश्चित हो, संगै मतियारहरु नि जान्छन् ….(भिडियो सहित)